मध्यबिन्दु अनलाइनसुशासनका पक्षमा हाम्रो ख़बरदारी | ‘गो–एमएल’ बैंकिङ कारोबार झण्झटिलो, के हो ‘गो–एमएल’ ?
जलेश्वरको संरक्षणमा रिब्दिकोट गाउँपालिकाका
ठाकुर महतो रणनीती: जसपामै रहेर नयाँ पार्टीको अभ्यास
३५ अर्बको मेलम्ची खनेपानि आयोजना ध्वस्त,अब कहिले काठमाडौं आउँछ मेलम्चि ?
‘गो–एमएल’ बैंकिङ कारोबार झण्झटिलो, के हो ‘गो–एमएल’ ?
मध्यविन्दु/काठमाडौं – माघे संक्रातिकै दिन पारेर वाणिज्य बैंकहरुले बुधबारदेखि गोएमएल प्रविधि लागु गरेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा बैंकहरुले बुधबारदेखि गोएमएल सफ्टवेयर लागु गरेका हुन् ।
वाणिज्य बैंकहरु पछि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुमा समेत यो सिस्टम लागू गर्ने राष्ट्र बैंकको योजना छ । आगामी असार महिनादेखि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुमा पनि लागु हुने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए ।
यो सिस्टम राखे पछि बैंकिङ केहि झण्झटिलो हुनेछ । अहिले कसैको नाममा रकम जम्मा गर्न भौचर भरेर जम्मा गर्नेको नाम लेखेमात्रै पुग्ने थियो । तर अब भने भौचरमा जम्माकर्ताले ३ पुस्ते विवरण समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
यतिमात्रै होइन नगद तथा चेक जम्मा गर्न जानेले आफ्नो सरकारी मान्यता प्राप्त सक्कली परिचयपत्र पनि साथै देखाउनु पर्नेछ । तिन पुस्ते भर्नु पर्नेदेखि लिएर सक्कल परिचय पत्र समेत देखाउनु पर्ने भएकाले विद्यमान व्यवस्था भन्दा यो विधि केहि झण्झटिलो हुनेछ ।
के हो गोएमलएल ?
गोएमएल भनेको एउटा सफ्टवेयरको नाम हो । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणका लागि उपर्युक्त हुने भएकाले अन्तर्रा्ष्ट्रिय स्तरमा समेत यसको प्रयोग बढिरहेका जानकारहरु बताउछन् । विश्वका धेरै देशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यस सफ्टवेयरको प्रयोग गरिरहेका छन् ।
वाणिज्य बैंकका सीईओहरुको संगठन नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल गोएमएमल सफ्टवेयर प्रयोग हुनु सबैका लागि राम्रै हुने बताउछन् । अहिलेको भन्दा यो सिस्टम लागू भए पछि सूचना धेरै दिनु र कागजात समेत उपलब्ध गराउनु पर्ने भएकाले केहि समय लाग्ने भए पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणका लागि यो राम्रो हुने उनले बताए ।
गोएमएलमा जानै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भए पनि सबै वाणिज्य बैंकहरुले सोमबारसम्म नै सिस्टम तयार पारेका छन् । सबै बैंकहरुले यो सफ्टेवयर कार्यान्वयनमा ल्याएपछि चेक जम्मा गर्न जानेले पनी बैंकहरुलाई सबै विवरण पेश गर्नु पर्नेहुन्छ ।
उक्त सफ्टेवयर कार्यान्वयनमा ल्याए पश्चात बैंकहरुले चेक तथा नगद जम्मा गर्ने फारम नयाँ बनाउँदै आन्तरिक प्रणालीलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो सिस्टम लागु भए अवैध रकम कसैले जम्मा गर्न नसक्ने र गरिहाले उसलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणले सहजै पहिचान गरी कारबाही गर्न सक्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले दुई अर्बको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने
कोरोना प्रभावित ऋणीका लागि राष्ट्र बैंकको राहत प्याकेज
अमेरिकी डलर हालसम्मकै महँगो
बैंकिङ क्षेत्रको एक उदाहरण : अनुपमा खुञ्जेली
बुधबार, फाल्गुन २१, २०७६
एटीएम मेसिन फुटाउँदै गर्दा भक्तपुरमा एक युवा पक्राउ
२ प्रतिशत व्याजदरमा पैसा लिएर १८ प्रतिशत असुल्दै लघुवित्त
मेलम्चीमा भिषण बाढी, रातोपुल बगायो
नेपालको बटमलाइन ‘हस्ताक्षरसहितको समान अध्यक्ष’
फेरी उर्लियो मेलम्ची, नदिकिनारमा हाहाकार !
कतै पार्टीको महाधिवेशन पनि तरुण दलको जस्तो हुने त होइन ? – डा.कोइराला